high-Density PCB, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PCB, Multilayer PCB - Hengda
ရှန်ကျန်း Hengda အီလက်ထရောနစ်လီမိတက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
quick ပြန်လာ PCB ရှေ့ပြေးပုံစံ
multi-layer ကို PCB
Flex ကို & တင်းကျပ်-Flex ကို PCB
ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB ညီလာခံ
Turnkey PCB ညီလာခံ
လျှပ်စစ် Cable ကိုညီလာခံ
မှို / စိတ်တိုင်းကျဝင်း
PCB ဒီဇိုင်း / Layout / ကို Reverse
စိတ်ကြိုက် Power Supply
PCB ညီလာခံ Capability
EMS Turnkey ဝန်ဆောင်မှုအီလက်ထရောနစ်
aluminum ကိစ္စတွင် extruded
စမတ်အီလက်ထရွန်နစ်အကောက်ခွန်လုပ် PCB / PCBA
FR-4 TG170 တင်းကျပ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှေးခယျြ? PCB အတွက် 15 နှစ်အတွေ့အကြုံကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် PCB ညီလာခံ / ISO9001, TS16949, ul သဘောတူညီချက်နှင့် RoHS PCB ဒီဇိုင်းအဘို့ / တစ်ခုမှာ-stop ဖြေရှင်းချက်လိုက်နာရမည်, အမြန်-အလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, အစိတ်အပိုင်းများကို sourcing, Smt & မှတဆင့်-ပေါက်ပရိသ / Functional စမ်းသပ်ခြင်း, ဝင်းပရိသ / စမ်းသပ်ခြင်း န်ဆောင်မှုများ: Aoi စစ်ဆေးရေးအတွက်တိုက်နယ်စမ်းသပ်ခြင်း, X-ray နဲ့ Functional စမ်းသပ်ခြင်း။
အပြည့်အဝ / တစိတ်တပိုင်း Turnkey / ပစ္စည်းအဟောင်းလက်ခံ PCB ညီလာခံ / ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB ညီလာခံ / PCB ညီလာခံ / PTH, Smt နှင့်ရောထွေးနည်းပညာ circuit ကိုလျင်မြန်စွာ-Turn ပရိသ / Fine-စေး BGA, pop, QFN နှင့်အသေးငယ်ဆုံးအထုပ် 0201 / RoHS လိုက်နာခဲ-အခမဲ့ပရိသ / ညီ / 100% Aoi စမ်းသပ်ခြင်းအပေါ်ယံပိုင်းနှင့် BGA / IPC နျ Standard Class ကို2X-ray စမ်းသပ်မှု /
ရှန်ကျန်း Hengda အီလက်ထရောနစ်လီမိတက်။ , 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, (ရှန်ကျန်းမြို့တွင်အခြေစိုက်သည် pcb ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း Zhuhai တွင်တည်ရှိသည်, အ pcb စည်းဝေးပွဲကိုအခြေစိုက်စခန်း Shenzhen baoandistrict ၌ရှိ၏), အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန် R & D အတွက်အထူးပြု, PCB ဒီဇိုင်း, PCB ကိုယ်ပွား, PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု , PCB စည်းဝေးပွဲကို, OEMODM ဝန်ဆောင်မှု .Hengda ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်နေရာတည်းမှာ PCB ဖြေရှင်းချက်န်ဆောင်မှုများနှင့်ပြည်တွင်း, ပြည်ပလုပ်ငန်းတွေ, စက်ရုံတွေ, ကုန်သည်များ, သုတေသနဌာနများအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
Related န်ဆောင်မှုများအကြောင်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဘို့ကိုအီးမေးလ် Leave ကျေးဇူးပြု. ပြီးတော့ကျနော်တို့ကို 24 နာရီအတွင်းမှာပဲခုနှစ်တွင် Touch ကို Be ပါလိမ့်မယ်
ဖုန်းကို + 86-15875593650
လိပ်စာ အခန်း 1502, အဆောက်အအုံ Bailichun, tianyou ၏ဒုတိယစက်မှုလုပ်ငန်းပန်းခြံ, No.28 Xintang လမ်း, Fuhai လမ်း, Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်း
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021 : All Rights Reserved. ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များ ,မြေပုံအညွှန်း ,amp မိုဘိုင်း
Pcba ညီလာခံရှေ့ပြေးပုံစံ , Multilayer Pcb , Pcba ရှေ့ပြေးပုံစံ , တင်းကျပ် Pcb ဘုတ်အဖွဲ့ , ရှေ့ပြေးပုံစံ Rohs Pcb ဘုတ်အဖွဲ့ , Bom Gerber ဖိုင်များ Multilayer Pcb ,